Iingcamango ze-Ankle Tattoo kunye nokuPhefumlelwa | Ukuzoba
Iingcamango ze-ankle tattoo
Susana Garcia | | Iitatoo, Iitattoo zeqatha
El iqatha yindawo ebonakala kakhulu ehlotyeniKungenxa yoko le nto iyindawo apho ezinye iitatoo ezincinci zihlala zibekwa khona. Umphezulu awubanzi kakhulu kwaye kuya kufuneka udlale ngeemilo ezinikezelwa ngamaqatha ukwenza uyilo oluhle. Nangona kunjalo, kukho inani elikhulu leembono ze tattoo ezikhoyo ukwenza kule ndawo.
Los Iitatto zeqatha Bonzakalisa kakhulu, kuba yenye yeendawo ezibuthathaka ezenza ukuba sizive inaliti ngakumbi ngexesha le tattoo. Kungenxa yoko le nto kufuneka sikhumbule ukuba ayinguye wonke umntu okwaziyo ukufumana umvambo kule ndawo, nangona iziphumo zilungile.
1 Iitattoo ezandisiweyo
2 Iitattoos ngasemva
4 I tattoo yentyatyambo yeLotus
5 I tattoo yesongo
6 Iitatto ezihlekisayo
7 Iitattoos ezimbini
Kule meko sinokubona ezinye Iitattoo ezenziwa ecaleni kwamaqatha, ukuthatha ithuba loyilo olude. Olu hlobo lweetattoo zihlala zibonwa kwiintolo, ezithe ngqo kumabinzana. Ulungelelwaniso oluhle olubonakalayo nanini na xa sinxiba izihlangu ezisezantsi. Ayifani nemeko yeetatoo ezinyaweni, ezingafane zibonwe, xa sinxibe iimbadada.
Kulo umva weqatha Unokwenza ii-tatoo ezintle, ezihlala zihlisiwe njengezangaphambili, ukubenza bajongeke ngakumbi. Olu hlobo lwe tattoo lunokufana nolwangaphambili kodwa lukwabandakanya iitatoo ezincinci kakhulu kunye neentyatyambo, ezinesiqu eside. Kule mizekelo sibona umthi, osixelela ngomfuziselo ophefumlelweyo kwindalo, kunye nezinye iintyatyambo ezivulayo, into ebonisa ukukhula komntu.
Las iintyatyambo zifanekisela umhlaba wobufazi Kwaye zineentsingiselo ezininzi kuxhomekeka kuhlobo lwentyatyambo ekhethiweyo, kuba banolwimi olupheleleyo. Kuqhelekile ukuzibona kwiitattoos kwaye inokuba ngumbono olungileyo emaqatheni, kuba zinokubonakaliswa kwiitatto ezincinci ezincinci. Sibona isityalo esiziqhelanisa nomqolo weqatha kunye nentyatyambo eqala ngoonobumba abakhulu.
I tattoo yentyatyambo yeLotus
La Intyatyambo yelotus luphawu olubaluleke kakhulu kwinkcubeko yamaIndiya, njengoko ibonisa ukufika kwenkuthazo. Isityalo esixelela malunga nendlela onokuziphucula ngayo ekukhangekeni kobunyulu kunye nokukhanyiselwa. Le ntyatyambo ye-lotus ikwanemilo entle kakhulu, ke abantu abaninzi bayayikhetha njenge tattoo abayithandayo. Into emnandi ngale ntyatyambo kukuba zombini zinokufakwa kumvambo ogcwele iinkcukacha, kwisitayile esinyulu se-mandalas, nakwindlela engacacanga kunye neyona encinci.
I tattoo yesongo
Los I tattoo yesongo Banokuba ngumbono omkhulu kwiindawo ezinjengeemida. Olu hlobo lwe tattoo lunokwenziwa kwizandla zombini kunye nasemaqatheni. Kukho imibono eyahlukeneyo yokwenza isongo esihle esijikeleze iqatha. Abanye baphefumlelwe zii-henna tattoos ukwenza uyilo olufanayo, abanye bakhetha utolo, olungumqondiso womzabalazo kwaye wokuqhubeka uqhubeka phambili. Sikwazibonile iinkcukacha zineentsiba kunye neminqamlezo.
En los amaqatha ayisebenzi kakhulu kumphezulu womsebenzi, ke iiTattoo zihlala zincinci, ezinye iinkcukacha esifuna ukuzenza ukuqaqambisa into esiyithandayo. Kungenxa yoko le nto sifumana zonke iintlobo zezinto ezibhalwe tattoo kubo. Ukusuka kufudo olunokufuzisela uthando lolwandle kwipayinapile ehlekisayo.
Los Iitatoo ezimbini inokuba ngumbono omkhulu. Kungenxa yoko le nto sifumana ii-tatoo ezincinci ezinokudityaniswa okanye zifane ngokulula. Kula maqatha sibona ukumelwa kweekati ngeendlela ezahlukeneyo. Kwelinye icala, kukho abo bafumana ii-tatoo ezimbini ezilinganayo kwiindawo ezingabonakali kakhulu, ezinjengezihlahla okanye amaqatha, ukuze zilingane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iitatoo » Iingcamango ze-ankle tattoo
Iitolo zeTolo eminwe, ebonakalayo kodwa enomdla kakhulu
Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka, oxabisekileyo kunye nomqondiso weentyatyambo